IPro-Hunan Nanbeiwang Biological Technology Co, Ltd.
I-D-pantolactone ingukuhlobana okubalulekile kwe-chiral kokuhlanganiswa kochungechunge lwe-D-pantothenic acid. Isetshenziselwa ikakhulukazi ukwakheka kwe-pantothenic acid (uvithamini B5) noma usawoti we-calcium, i-D-panthenol (uvithamini B5), i-D-pantoethylamine neminye imikhiqizo.
Inkampani yethu yamukela ama-bacterium we-genetic engineering engineering ama-L-lactonohydrolase akhiqiza ubuchwepheshe kanye nenqubo yokuqala yesayensi kanye nobuchwepheshe bokulungisa abathwali, futhi ilungiselela iD-pantolactone ngendlela elandelayo yokulungiselela i-D-calcium pantotheate:
Cishe unyaka owodwa wokuthuthuka kwezobuchwepheshe kanye nokwenza kahle kwenqubo, ukuqina kobukhulu obuphezulu kusetshenziswa manje kuhlelo le-expression ye-E. coli, futhi umsebenzi wokufukula ungafinyelela ku-15000 U / L, kanye nokukhishwa okuzinzile nokunokwethenjelwa kwe-enzyme, ukuhlanza, ukuguqulwa kanye nokwenza amandla ulayini unqunyelwe. Uketshezi lwe-enzyme lunobumsulwa obuphakeme, umsebenzi wokufukuza kakhulu, amandla amahle, ukusebenza okuhle kokuhlunga, ukusebenza kahle okuphezulu kwinqubo yokulungiselela kwe-enzymatic ye-D-pantolactone, inqubo elula nekhwalithi yomkhiqizo omuhle. Ngokusebenziseka kobuchwepheshe bokulungiselela ukwethula abathwali abangafakwanga, ubuchwepheshe bokulungiselela abathwali buye benza impumelelo enkulu kwinqubo nezindleko. Ngokuhlola okuncane nokuphakathi, umsebenzi wokufaka amandla angafinyeleli ngaphezulu kwe-100U / g, bese ibhethri lokuguqula umjikelezo lingabalwa lize lifike ku-100 batches ngokuya ngesilinganiso sokuwohloka komsebenzi we-enzyme.